အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီပေါ်ပေါက်လာပုံ - Islamic Religious Affairs Council
၅၇ ကြိမ်မြောက် အစ္စလာမ့်ဝန်ထမ်း အန်ဆွာရီ သင်တန်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးဝင်းမြင့်ထံသို့ မြန်မာနိုင်င�
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအပေါ် ပစ်မှတ်ထားလုပ်နေတဲ့ လ၀က
Islamic Religious Affair’s Council’s goal is to beaperfect Muslim &atrue and faithful National and citizen based on the dignity and glory of our forefathers as in the history of the past.
To represent as an Islamic organization on behalf of Muslims residing in Myanmar. To establish unity among Myanmar Muslims To establish understanding, mutual respects sympathy and friendships between Myanmar Muslims and other faiths. To solve the problems if any, as and when arises in connection with Islamic affairs according to teaching and decisions of Islamic Religions and to harmonize with nation’s historical and cultural aspects.
Union Of Myanmar Islamic Religious Affair's Council Member Organization of RISEAP Objectives of the Organization To give ways and means to those who Profess Islam: religious ways of practice, the teachings and thoughtsabout Islam.
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ( ၁ - ၁၅ )
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ( ၁၆ - ၃၀ )
Myanmar Prayer Times
(၂) (၁၈၂၄)ခုနစ်တွင်ပထမအကြိမ်၊ (၁၈၅၂)ခုနစ်တွင် ဒုတိယအကြိမ်၊ (၁၈၈၅)ခုနစ်တွင် တတိယအကြိမ်၊ အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲများဖြစ်ကြပြီးနောက် အင်္ဂလိပ်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးအား
သိမ်းပိုက် အုပ်စိုးခဲ့ပါသည်။ ထိုစစ်ပွဲများတွင်လည်းကောင်း၊ ထိုစစ်ပွဲများပြီးနောက် မြန်မာမျိုးချစ်တို့၏ နယ်ချဲ့ ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲများတွင် လည်းကောင်း၊ အခြားတိုင်းရင်းသားညီနောင်များနည်းတူ
(၃) ၎င်းနောက် အင်္ဂလိပ်တို့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးအား ကျွန်ပြုအုပ်ချုပ်ရာတွင် ၄င်းတိုို့၏ စီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် တိုင်းတစ်ပါးမှ အခြေချလိုသူ အမြောက်အမြားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ ၀င်ရောက်လာသူတိုင်းတစ်ပါးသားများအနက်အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွား အစ္စလာမ်သာသနာဝင်များလည်းပါရှိခဲ့ပါသည်။
(၄) ၂၀-ရာစုအစပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားများသည် အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်များနိုးကြားလာစပြုကာ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများထူထောင်ဖွဲ့စည်းကြရာတွင် အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တို့သည်လည်း(၁၉၀၉)ခုတွင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဗမာ မွတ်စ်လင်မ်များအတွက်ဟူသောကြွေးကြော်သံဖြင့် အေရဟင်နှင့် ဟာဂျီဦးဘအို(KIH)တို့ ဦးဆောင်၍ ဘားမားမွတ်စ်လင်မ်ဆိုစိုက်တီ(BURMA MUSLIM SOCIETY)အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။